मलेशियाबाट नेपालीको कडा प्रश्न ? दिल निशानी मगर लाइ भिडियो - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»मलेशियाबाट नेपालीको कडा प्रश्न ? दिल निशानी मगर लाइ भिडियो
मलेशियाबाट नेपालीको कडा प्रश्न ? दिल निशानी मगर लाइ भिडियो
By रबि धिताल on १५ पुष २०७४, शनिबार ०४:०२ भिडियो
काठमाडौं, पुस १५: ‘रबि लामिछाने’ कसरी बसिरहेका छन भन्ने कुरामा के परराष्ट मन्त्रालय , अध्यागमन बिभाग, पुलिस प्रशासन, प्रेस काउन्सिल, बार एसोसिएसन, बेखबर छर..? पक्कै पनि छैन। पत्रकारिता सम्बन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ डक्सहरु। अनि आउ बहस गर्न म तयार छु। हैन भने सबै मुन्टेर जाओ अदालतमा मुद्दा हाल।
अदालत’ले मुलाङहरु’को पक्षमा फैसला दियो भने, लाइभमा कान समातेर १० पटक उठबस गरेर मुलाङहरु सङ्ग माफी माग्छु। ग्यारेन्टी भो। UAE’को PR लिनलाइ धर्म परिवर्तन गर्न सम्म पछि नहट्नेको पछाडी दौडने निराक्षरहरु। दिल निसानी मगर” मैले यो भिडियोमा तपाईं प्रती उठाएको प्रश्नप्रती जवाफ’को अपेक्षा राख्दछु।